Fursaddani Yaanay Ku Dhaaafin
Umad kastaba waxa ay leedahay maalmo ay xusuusato islamrkaana ay wayneeyaan. Dadka Muslimiinta ahina waxa ay maalmahan ku gudda jiraan bilowgii bisha Dhul Hijjah oo ka midda bilaha xurmada wayn ku leh Muslimiinta agtooda. Tobanka cisho ee bishan ugu horeeyaa waa maalmaha ugu qiimaha iyo fadliga badan Ilaahay agtiisa. Waxaa uu soo wariyay asxaabiga la yidhaa Ibnu-cabaas (Ilaahay ha ka raali noqdee) in uu Nabigeenu (Calyhi Salaatu Wa Salaame) uu sheegay in maalmahani ay yihiin maalmaha Ilaahay agtiisa cibaadada loogu jeclyahay. Waxaa tobonkan cisho ee bishan ugu horeeya ka midda maalinta Carafa oo ah maalinta ugu qiimaha badan Xajka. Waa maalinta uu Ilaahay adoomihiisa gudanaya fariidada xajka danbigooda dhaafo. Sidaa daraadeed waxa ay maalmahani inaga muddan yihiin ixtiraam iyo in aan ka faa段daysano. Qormadan gaaban waxaan idinkula wadaagi sidii aynu uga faa段daysan lahayn inta ka hadhay maalmahan barakaysan ee Dhul Hijja.
Ilaahay aan u soo soo noqono
Fursaddan khayrka leh inaga oo ka faa段daysanayana aan Ilaahay u soo noqono. Macaasidu waxa ay soo dadajisaa burburka qofka iyo umadaha ee si Ilaahay nolosheena u barakeeyo aynu u toobad keeno Ilaahay. Qofkasta oo inaga middi walaalayaal wuu khaldamaa laakiin kuwa khaladma waxa ugu khayr badan kuwa soo laabta, ee aan Alle u soo laabano. Xajka waa fursad uu qofka xajinayaa danbiyadiisa ku soo maydho, laakiin kuweena aan Ilaahay u qadarin in ay fursad u helaan in ay gutaan fariidadan xajka sanadkan aynu inakuna inaka oo barakada maalmahan ka faa段daysano aynu toobada badsano si uu Alle inoo cafiyo.
Ha la is Cafiyo
Waxaa soo aroortay in Nabigeenu (Calyhi Salaatu Wa Salaam) uu sheegay in Ilaahay loo soo bandhigo cibaadada adoomahiisa maalmaha Isniinta iyo Khamiista. Alle qof kasataba cibaadadiisa wuu eegaa waanu abaal mariyaa adoomihiisa wanaaga sameeyay laakiin labada qof ee dhibi dhex taal camalkooda ajar loogama qoro ilaa ay is cafiyaan. Hadii aynu Musliim nahay waxaa la inagu ibtileeyay khilaaf iyo is nacayb. Soomaali hadaynu nahayna khilaafka iyo is nacaybku waxa ay noqodeen sifooyinka la inagu aqoonsado. Waxaa dhab ah in umad is khilaafsani aanay mutaysanayn naxariista Ilaahay. Sidaa daraadeed walaalayaal inagoo fursadan qaaliga ah ka faa段daysanayna aynu is cafino. Dadka dhibi waa ay kala gaadhaa laakiin waa ay ka socdaan waana ay is cafiyaan. Nabi Yusuf walaalihiisii ceelka ku tuuray ee doonayay in ay khaarajiyaan markii uu ka awood batay uu cafiyay markaas ayuu waliba dawladii uu ka talinayay ku soo dhaweeyay. Wadadaaa nabi Yusuf ayuu Nabigeenii Maxamed (Calyhi Salaatu Wa Salaam ) ayuu maray markii uu Qabiilkiisii isku dayay in ay dilaaan, ee soo erayay uu a adkaaday ee uu dabadeena wada cafiyay. Aynu tusaale ka dhigano Nabiyadaa Ilaahay. Qofkii raba in camalkiisa la aqbaloow qof kale qalbiga wax ugu hayn.
Soomka Maalinta Carafa
Sunnada Nabigeena ayay ahayd in uu soomi jiray sagaalka maalmood ee ugu horeeya bishan. Waxa kale oo nabigeena ka sugnaatay in uu sheegay in Soomka maalinta carafa lagu dhaafo danbigii laba sano.Waxa kale oo soo aroortay in soomka maalintani uu u dhigmo sanad soomkii. Ruwaayad kalena waxaa ay sheegaysaa in uu u dhigmo soomka labo sanadood. Sidaa daraadeed aan ku dadaalo soomka maalmahan. Ugu yaraan yaanay ina dhafin Soomka maalinta carafa oo Sanadkan ku beegan maalinta Sabtida ee ay bishan aynu ku jirnaa ay tahay kow iyo sodonka (31/01/2004)
Ducada Ha la Badsado
Ducadu waa cibaadooyinka uu Alle jecelyahay sidaa daraadeed ha la badsado ducada maalmahan. Nafteena, ehelkeena iyo umadeenaba aynu ugu ducayno in uu khayrka ina waafajiyo.
Masaakiinta Iyo Kuwa Dhiban Ha la Caawiyo
Sunada waxa ka midda in uu qofkii awood lihi uu wax gawraco masaakiintana u qaybiyo. Sidaa daraadeed qoflkii awood u leh waa in uu sunnadan soo Nooleeyo .
Gabagabdii waxaan akhristaha sharafta leh iyo naftaydaba u rajaynayaa in uu Alle xaqa ina waafajiyo inaga dhigo kuwuu u soo laabta kuna toosa dariiqiisa. Ha inaga dhigo kuwii ka faa段daysta maalmahan sharafta leh. Ilaahay camalkiina iyo kaygaba ha aqbalo. Waxaanan idiinku hambalyaynayaa munaasabadan Xajka iyo ciida Carafaba.
Halkan ka eeg Buurta Carafa....